Muqdisho: Qarax Ismaiidaamin Ah Oo Lagu Dilay Saraakiil Ciidanka Federaalka Ka Tirsan | Araweelo News Network
Muqdisho: Qarax Ismaiidaamin Ah Oo Lagu Dilay Saraakiil Ciidanka Federaalka Ka Tirsan
Muqdisho(ANN)-Saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa sheegay in qof ismiidaamiyey uu weerar ku qaaday xero milatariga lagu tababaro oo ku taalla duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaasi oo askar badan ay ku dhinteen.
Qaar ka mid ah ciidamadda oo la hadlay warbaahinta , ayaa sheegay in ugu yaraan shan askari ay ku dhinteen qaraxa, oo ka dhacay xerada tababarka ciidamadda ee warshaddii hore ee Nacnaca.
Askarta dhimatay ayaa waxaa ku jira saraakiil sare oo ay ka mid tahay haweeney, isla markaana waxa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr askari oo kale, waxaana fuliyay weerarkaa qaraxa qof ku labisnaa dareyska ciidamada milatariga Soomaaliya.
Dhinaca kale Afhayeenka Gobolka Banaadir ayaa warbaahinta u sheegay in Qaraxa ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof.
Qaraxa, ayaa kusoo beegmay maalin kadib markii taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya Jeneral Axmed Maxamed Jimcaale Cirfiid uu ka badbaaday qarax baabuur oo ismiidaamin ahaa, kaas oo lagu dilay ugu yaraan 15 qof.